Khibrad ku saabsan Carwadii Canton 127-aad
Waxaa saameeyay xaalada faafa, Carwadii 127-aad ee Canton waxaa lagu qabtay khadka tooska ah waxayna ku dhammaatay si dhammaystiran. Fursadaha iyo caqabadaha ayaa kuwada nool barxadda internetka ee 'Canton Fair', taas oo tijaabo u ah shirkadaha ganacsiga caalamiga ah ee Shiinaha iyo soo saarayaasha. Kooxda Haorui waxay si firfircoon uga qaybqaataan ...
Fadhiga musqusha noocee ah ayaad doorbideysaa?
MDF (Dhexdhexaad-Cufnaanta Fiberboard) waa badeecad alwaax la soo saaray oo ku cadaadinaya faybarka alwaaxda guddi fidsan hoosta heerkulka sare iyo cadaadiska, ka dib ayaa loo goyn doonaa qaab loo qaabeeyey. Hadday tahay midab midab-midab ah ama daboolay patterka qurxinta ...
Wasaaradda Ganacsiga ee PRC waxay go’aansatay in Carwada 127-aad ee Canton Carbeed lagu qabto khadka tooska ah laga bilaabo Juun 15 ilaa 24, 2020.
Bandhigga Soo Dhoofinta iyo Dhoofinta Shiinaha ("Canton Fair" ama "Carwadda"), oo la qaban doono Juun 15 illaa 24, ayaa ku martiqaadeysa in ka badan 400,000 oo iibsadayaasha caalamiga ah bandhigoodii 127-aad iyo kii ugu horreeyay ee abid lagu qabto. Iyadoo loo marayo barnaamijyada dhijitaalka ah, Canton Fair waxay sii horumarin doontaa dib u soo celinta ganacsiga iyo o ...